Mamorona sy amboary ireo sary masina SVG ao amin'ny tranokala ICONSVG | Famoronana an-tserasera
ICONSVG, tranokala maimaim-poana hahafahanao manamboatra ny kisary SVG
Mamela antsika hanakaiky ny karazana loharanom-pahalalana isan-karazany tsy misy farany toy ny, ny Internet sary masina namboarina azonao foronina na mahazo avy amin'ny ICONSVG.
ICONSVG dia tranonkala maimaim-poana Azonao atao ny miditra raha te hahazo ireo sary masina SVG ilainao ianao ary mampiavaka ny fanehoana farany ambany amin'ny kilobites an'io sary io izay ilainay asehoy ny pejy fangatahana fifandraisana na ny sarety ho an'ny ecommerce anay.
ICONSVG dia tranonkala iray mampiasa interface minimalist ary izany dia tsy mampiditra ny mpampiasa mihitsy. Eo an-tampony dia hananantsika ny motera fikarohana, ao afovoany izay hitondra ny ankamaroan'ny habaka ireo sary maro karazana SVG ary eo ankavanana ny takelaka miaraka amin'ny mombamomba ireo sary masina rehetra izay apetakay.
Izy io dia ao amin'ilay takelaka ahafahantsika manova ny kisary habe, haavony, loko, fisivalana ary inona ny kaody vokatr'izany aorian'ny fanovana isan-karazany natao. Adikao ny kaody SVG na ampidininay ary toy ny hoe amin'ny mazika dia efa manana an'io kisary io isika izay hitana ny kely indrindra amin'ny tranokalanay raha ampitahainay amin'ny anarany ao anaty endrika JPG.
Ary na dia tsy manana sary masina an-jatonyNy marina dia miaraka amin'ireo rehetra ananan'izy ireo, dia azo ampiasaina amin'ny sary masina izay matetika mampiseho zavatra tena ilaina toy ny adiresy, ny fanairana, ny fampandrenesana, ny andro / alina, ny toerana, ny famantarana ny lalana ... Andao, tsy tsy misy na inona na inona raha tsy mitady sary masina manokana isika.
Raha tsikelikely dia manomboka mampiasa azy bebe kokoa ianao, mamporisika anao izahay hampiasa ny bokotra fanomezana manome eo amin'ny farany ambany ankavia hanasana ny mpamorona kafe. ICONSVG dia tranonkala iray izay fampiasa amin'ny Internet mitovy amin'izany ihany noho ny maro hafa izay noresahintsika tato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » ICONSVG, tranokala maimaim-poana hahafahanao manamboatra ny kisary SVG
Ity no sary famantarana vaovao any Paris izay miorim-paka lalina